Ụlọ ọrụ ụlọ SPC | Ndị na -emepụta China SPC Flooring, Suppliers
Vinyl flooring okomoko ịkwanyere p ...
LVT flooring 3d Ft Stic ...
SPC flooring elu àgwà ...
SPC flooring isiike isi Na ...
Mbupụ ọrịre dị ọkụ Ọhụrụ Nchapụta SPC Ntọala na mkpọchi mkpọchi SPC Vinyl flooring
Plastic Plastic Composite (SPC), akụkụ pụrụ iche bụ akwa siri ike nke na -abụkarị ntụ ntụ. nke kwụsiri ike karịa taịlịnị vinyl omenala. Ngwakọta plastik nkume a na -eguzogide mmụba na mgbagide ruo ọtụtụ iri afọ, ọ na -arụkwa nke ọma n'otu ebe mmiri nwere ike bụrụ nsogbu. Ọ bụ ihe mkpuchi mmiri 100% na -agaghị agbagọ ma ọ bụ tụgharịa.
SPC flooring siri ike isi n'ijikọta Pịa mkpọchi ịkwanyere Vinyl flooring
SPC pụtara ihe mejupụtara plastik. ụdị ntọala ala dị ka simenti ma ọ bụ seramiiki ma ọ bụ ala dị ugbu a wdg.
Ntọala SPC Pịa ijikọ ya na nkwado Ixpe
Uru nke SPC Vinyl Flooring.SPC vinyl na -aghọ otu n'ime ụlọ kachasị ewu ewu iji wụnye maka ọtụtụ ebumnuche. Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe ụlọ, onye njikwa ihe onwunwe ma ọ bụ onye nwere azụmaahịa, ala SPC vinyl nwere ike ịbụ nnukwu nhọrọ maka ọrụ gị ọzọ!
Aha Akara ：IVERSON
Size plank ：935*183*4mm 1210*183*4.5mm/6mm/8mm
Yiri akwa ：0.25mm
Ụdị Nhazi: Oge a
Ojiji: ime ụlọ
N'elu Ọgwụgwọ: Agba Dị Mfe
Ntọala ụlọ bụ nnukwu ihe na -achọ ụlọ mma. Ọ na -esiri ọtụtụ ndị ike ịhọrọ n'etiti ala SPC na taịl seramiiki. N'ezie, ha dị iche iche n'ọtụtụ ụzọ.